Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo diray
June 30, 2020 Mahad Jama 3
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray danjiraha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Abuukar Baalle oo ku guuleysatay in uu noqdo Gudoomiye Ku xigeenka Golaha guud ee Qaramada Midoobay.
Farmaajo: “iyadoo ay inaga muuqato firfircooni, hal abuur hoggaamineed, dhexdhexaadnimo, ilaalinta xasilloonida Gobolka iyo ka shaqeynta danaha wadajirka.”
Trump: “Somalia nabadgelyo majirto; boliis majiro; waa fowdo; wax jiraa majiraan.”
Farmaajoow, isgarabdhig hadalkaaga iyo kan taliyehaaga, Trump, oo aad ka tirsan tahay una ahaan jirtey dhaqdhaqaaqe (activist) xisbigiisa Republicanka adigoo madow ah, muslimna sheegta. Qofkii wiqiyad caqli ah ku jirto, taas keliya ayaa ugu filan inuu uga cabbirqaato shakhsiyaddaada.
Waa la ogyahay in Marc Mezvinsky oo ah ninka Yahuudka ah ee qaba Chelsea Clinton oo ah gabadha Hillary Clinton uu kaala hadlay habarta Mrs Clinton, kadibna ay kaala hadashay Sh Shariif oo sidaa uu Ra’iisalwasaare kuugu magacaabay. Adigoo waxaa tahay iyo cid ku taqaan aanay jirin, laguguna aamini karin waxar jaban.
Yahuud qofna bilaash kuma taageeraan. Shuruudihii lagula soo galayna, maanta ayaa ifafaalahoodu nooga muuqdaa halka aad Somalia ku waddo.
Trump wax kasta oo uu yahayba, hadalkiisa ayaa ka xogogaalsan kaaga, runtana uga dhow.
Somalia waxba usoo kordhinmayso guddoomiye ku-xigeen waqti xaddidan leh oo meel looga magacaabay.
Xasillooni gobol baad ka hadlaysaa adigoo xafiiskaaga ay kugu ilaaliyaan ciidan ajanabi ah. Adigoon Xamar dhuumasho maahee aan xorriyad ku mari karin.
Waxaad ka hadashay ka wada shaqaynta danaha wadajirka ah oo aad uljeeddo kuwa Itoobiya iyo Abiy Ahmed, waxaadna dhabarka u jeedisay inaad ka shaqeyso danaha iyo wadajirka Soomaaliyeed.
“Meesha kamatage, waxna kamatare, waa barkumataal.”
Waa maxay hambalyadu? Booska ma Soomaaliya ayaa ku guuleeysatay, mise waa Shaqo uu nin Soomaaliyeed dalbaday oo uu ku guuleeystay??!
A.Arar yaan lagaa dareemin maandhe is xaji macno badan kuu sameyn maayo aduun iyo aakhiro midkoodna nacaybka badan ee kaa muuqda ha ku aakhiro seegin waa iga talo.